Ilebhu yokuphakamisa iveza iBhetteryPro, umxholo webhetri omtsha we-Apple Watch | Ndisuka mac
Ilebhu yokuphakamisa iveza iBhetriPro, umxholo webhetri omtsha weApple Watch
Inkampani yokuLungiswa kweLebhu ivelise ibhetri entsha ye-iPhone kwangaxeshanye sisiseko sokutshaja kwi-Apple Watch ke ngesixhobo esinye onokuyitshaja kwakhona i-iPhone, kwi Apple Watch nkqu nee-AirPods.
Yinto eyimfuneko ebalulekileyo kuhambo olude kwaye kukho amaxesha apho singabinayo iplagi efikelelekayo apho ube nakho ukudibanisa iiadaptha ukuze uzigcwalise kwakhona ezo zixhobo.
Izolo ii-imeyile ziqale ukufikelela kubalandeli abaninzi bophawu, kubandakanya nokwazisa abasebenzisi ukuba imveliso iza kuqala ukuhambisa kwiiveki ezintathu, ke abantu abayifumanayo ngoku baya kuba nayo 20% isaphulelo Ukuchwetheza ikhowudi yenyuselo AMANDLA PHEZULU Ngexesha lokuhlawula.
Inkwenkwezi yeebhetri zangaphandle kukuba iyenzile Itshaja yemagneti eqinisekisiweyo yeApple Watch (MFi). Inesikhundla se-8000mAh kwaye njengezibuko lonxibelelwano sinezibuko le-USB 3.0 kunye ne-USB encinci yokuzihlaziya. Ngokobungakanani, iyafana nobungakanani be-iPhone 7.
Ukugqiba ukucacisa ukuba njengoko ubona kwimifanekiso inebhanti yelastiki evumela iApple Watch ukuba ilungiswe ngokugqibeleleyo kwaye iphephe ukuwa. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngale mveliso, sikhuthaza ukuba undwendwele eli khonkco lilandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Ilebhu yokuphakamisa iveza iBhetriPro, umxholo webhetri omtsha weApple Watch
Gqiba iividiyo zakho ezijonga ubuchwephesha ngokuhambisa iiprojekthi zakho kwi-iMovie ukuya kwi-Final Cut Pro X
Le Mouse entsha yeArc Arface, elingana neMouse yeMagic yeApple